ဘေဘီလေးတွေကို နားပေါက်ဖောက်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သိထားသင့်တဲ့ အရေးကြီးသော အချက်များ - Chit MayMay
Home Child Care ဘေဘီလေးတွေကို နားပေါက်ဖောက်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သိထားသင့်တဲ့ အရေးကြီးသော အချက်များ
မွေးကင်းစကလေး နားပေါက်ဖောက်ပေးခြင်းကို ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံသာမက ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ယဉ်ကျေးမှုအတော်များများမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ အချို့သော လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ယောကျ်ားလေးတွေကိုတောင် နို့စို့အရွယ်လေးမှာပဲ နားဖောက်ပေးတတ်ကြပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ မေမေတို့ရဲ့ သမီးလေးတွေကို ဘယ်အရွယ်လောက်မှာ နားဖောက်ပေးနိုင်သလဲ? နားဖောက်ပြီးရင် ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမလဲ? ဆိုတဲ့ နားဖောက်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သိထားသင့်တဲ့ အချက်အလက်လေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ကလေးရဲ့နားကို ဘယ်အချိန်မှာ ဖောက်ပေးနိုင်လဲ?
အမေရိကန် ကလေးအထူးကုအကယ်ဒမီ (AAP) ရဲ့အဆိုအရ ကလေးကို နားပေါက်ဖောက်ပေးဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အသက်အရွယ်မရှိပါဘူး။ နားပေါက်ဖောက်တာဟာ အသက်အရွယ်ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် သန့်ရှင်းမှုမရှိဘူး၊ မမှန်ကန်ဘူးဆိုရင် အန္တရာယ်များပါတယ်။
တစ်ချို့မိဘတွေက ကလေးငယ်ကို ၁၂ရက်သားမှာ နားဖောက်ပေးကြသော်လည်း တစ်ချို့က ကလေးတစ်နှစ်ပြည့်မှ ဖောက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ AAP ရဲ့အဆိုအရ နားပေါက်ကို ဂရုစိုက်နိုင်တဲ့ အသက်အရွယ်ရောက်တဲ့အထိ (သို့) အသက် ၂နှစ်အထိ စောင့်ဆိုင်းဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
အသက် ၂နှစ်ဆိုတာ နားဖောက်ဖို့ သင့်တော်တဲ့ အသက်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ဓါတ်မတည့်မှု နည်းပါးလာပါတယ်။ ညွှန်ကြားချက်တွေကို နားလည်ဖို့ လုံလောက်တဲ့အရွယ်ပါ။ မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးအပါအဝင် ကာကွယ်ဆေးအများစု ထိုးတဲ့အချိန်လည်း ဖြစ်လို့ပါ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ကလေးငယ်တွေသည် Kelorid (အမာရွတ်တစ်သျှူးတွေများပြားလာခြင်း)က အနည်းဆုံး အသက် ၁နှစ်မှ ၁၀နှစ်ကြားအရွယ်မှာ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်နေရာမှာ ကလေးနားကို ဖောက်ပေးနိုင်သလဲ?
တစ်ချို့ကတော့ နားဖောက်တတ်တဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆေးပညာရှင်တစ်ယောက်ဆီမှာ ဖောက်လိုကြပြီး တစ်ချို့ကတော့ ရတနာဆိုင်တွေမှာ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာပဲဖောက်ဖောက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အလုပ်အတွက်သုံးတဲ့ ကိရိယာတွေက ပိုးသတ်ထားတာတွေ ဖြစ်ရပါမယ်၊ ကလေးငယ်တွေနဲ့ လူကြီးတွေအတွက် နားဖောက်ခြင်းက မတူကြောင်း သတိရပါ။ ထို့ကြောင့် ကလေးနားဖောက်ပေးတဲ့ဆိုရင် တွေ့တဲ့ဆိုင်ကို မရွေးချယ်ပါနဲ့။ တတ်ကျွမ်တဲ့ ဆရာဝန်တွေကိုသာ ပိုပြီးဦးစားပေးပါ။ အရိုးနုကိုထိမိရင် ရောဂါပိုးဝင်နိုင်ချေများ နားဖောက်တဲ့အခါမှာ အရိုးနုကို မဖောက်မိဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေကို နားပေါက်ထဲမှာ လုံခြုံစွာ မြဲမြံနေမယ့် နားကပ်တွေကိုသာ ဝတ်ဆင်ပေးသင့်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့အသားအရေကို ပွန်းရှမှု မဖြစ်စေတဲ့ နားကပ်တွေကိုသာ ရွေးချယ်ပါ။ နားဖူးလေးတွေက ပေါ့ပါးပါတယ်။ ကလေးအတွက် နားဆွဲတွေ ဘယ်တော့မှ မရွေးမိပါစေနဲ့ ၊ ကလေးက မတော်တဆ ဆွဲမိနိုင်ပြီး နားကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အိပ်ပျော်နေစဉ်မှာ ကလေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ကြီးမားပြီး ချွန်ထက်နေတဲ့ နားကပ်တွေကို ရှောင်ပါ။ ရွှေက ဓါတ်မတည့်မှုနှင့် ရောဂါပိုးဝင်မှုကို နည်းစေတာကြောင့် နားကပ်ရွေးချယ်တဲ့အခါ အနည်းဆုံး ၁၄ကာရက်ပါတဲ့ ရွှေမျိုး၊ ရွှေအစား နီကယ်မပါတဲ့ surgical steel မျိုးကို ရွေးချယ်ပါ။
နားဖောက်ပြီးရင် ဘာတွေ ကြိုတင်ကာကွယ်မလဲ?
နားမဖောက်ခင် နာရီဝက်/တစ်နာရီ လောက်ကြိုပြီး နားမှာ ထုံဆေးလိမ်းပေးထားတာမျိုး၊ နားမဖောက်မီ 15-30 မိနစ်လောက်အလိုမှာ ရေခဲကပ်ပေးထားမျိုးက အနာသက်သာစေပါတယ်။နားပေါက်တွေ အနာသက်သာစေဖို့ က ၄ပတ်မှ ၆ပတ်လောက်ကြာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအဆင့်မှာ ရောဂါပိုးဝင်/မဝင် စစ်ဆေးပါ။
နားဖောက်ပြီးတဲ့အခါ ဆရာဝန်က တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် နားဖောက်ထားတဲ့နေရာကို သန့်စင်ပေးဖို့ သင့်အားပြောပါလိမ့်မယ်။ နားကိုသန့်ရှင်းပေးတဲ့အခါမှာလည်း ဆရာဝန်ပေးလိုက်တဲ့ ဆေးရည်(သို့) အရက်ပြန် ဆွတ်ထားတဲ့ ဝါဂွမ်းနဲ့ ဆေးကြောပါ။ နားပေါက်ပြန်ပိတ်တတ်တာကြောင့် နားဖောက်ပြီး ခြောက်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အထိ နားကပ်ကို မချွတ်ပေးပါနဲ့။ ဖောက်ထားတဲ့နေရာကို သန့်ရှင်းတဲ့လက်တွေဖြင့် ကိုင်ပါ။ နားရွက်ကို မထိခင် သင့်လက်တွေကို သေချာစွာ ဆေးကြောပါ။
ဘက်တီးရီးယား ပျံ့နှံခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ နားဖောက်ဖောက်ပြီး ၄၅ရက်ခန့်လောက် တစ်နေ့လျှင် ၂ကြိမ် ပိုးသတ်ဆေး ပါးပါးလေးသုတ်ပေးပါ။ နားရွက်တစ်ဝိုက်ကို ကလေးအတွက် အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ antibacterial soap ဖြင့်သာ ဆေးကြောပါ။ ကလေးကို သူ့နားရွက်တွေ မထိမိစေဖို့ တားဆီးပါ။
နားပေါက်ဖောက်တာက ပိုးဝင်တတ်တာကြောင့် သေချာဂရုစိုက်ပေးရပါမယ်။ နားပေါက်ဖောက်ပြီး ရက်အနည်းငယ်လောက် နားပေါက်တစ်ဝိုက်မှာ အနည်းငယ် နီရဲနေမှာ ဖြစ်သော်လည်း ရက်သတ္တပတ်ကြာလာရင် ဒါက အပျော့စားပိုးဝင်မှု လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နားပေါက်ဖောက်ထားတဲ့နေရာမှာ အရည်ထွက်တာမျိုး ၊ အနီရောင် အရည်ကြည်ဖုထွက်နေပြီး နာကျင်နေတာမျိုး၊ ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အထိ ကိုယ်ပူပြီး ဖျားတာမျိုးတွေရှိရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြဖို့လိုပါတယ်။ အိမ်တွင်းကုစားနည်းအချို့က လူကြီးတွေအတွက် အဆင်ပြေပေမယ့် နုနယ်တဲ့ ကလေးအသားအရေကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Previous articleတစ်နေ့ချင်းစီမှာ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးကို အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့နိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၃၀)